ဇန္နဝါရီလ 27, 2010 တွင် 5:24 နံနက်
ဇန္နဝါရီလ 29, 2010 တွင် 4:41 နံနက်
ကိုယ့် Trac ၌ဤဗားရှင်းသစ်နဲ့ငါ့အတှေ့အကွုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့သတင်း posted. အခါသင်လုပ်နိုင်မယ့်ကိုကြည့်လိုက်ပါ…
ဒီလွှတ်ပေးရန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်, ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ် [နေဆဲအချို့သောအသေးစားပြဿနာတွေရှိများ, ဒါပေမယ့် OK ကိုဖြစ်ပါတယ်], ငါသည်ငါ့ site ကိုဝင်ငွေရသည့်အခါများနှင့်သင်တို့အားငါတစ်ဦးလှူဒါန်းမှုစဉ်းစားနေပါတယ်…
asaf chertkoff ကပြောပါတယ်
ဇန္နဝါရီလ 27, 2010 တွင် 4:44 ညနေ
ကိုယ့်အဘယ်ကြောင့်မသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့်အလံအားလုံးဗားရှင်း 0,42 ထ mest ရှိပါတယ် ...
နှင့်အစ္စရေးအလံဘာသာစကားကို kreyol ayisyen အနားမှာဖြစ်ပါသည်, အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက် ...
ဇန္နဝါရီလ 27, 2010 တွင် 6:29 ညနေ
အဆိုပါ css နှင့်အလံဖိုင်တွေပြောင်းလဲပြီ, Shift + F5 နှင့်အတူစာမျက်နှာတစ်ခုပြန်ဖွင့်ဖြစ်နိုင်လှည့်ကွက်လုပျသငျ့တယျ. ဒါဟာအလုပ်ဖြစ်တယ်လျှင်ငါ့ကိုသိပါစေနဲ့ကျွန်မသေချာကြောင့်အနာဂတ်ဗားရှင်းအတွက်ဖြစ်ပျက်မည်မဟုတ်စေပါလိမ့်မယ်
ဇန္နဝါရီလ 27, 2010 တွင် 5:22 ညနေ
အသစ်ဟာအီတီကိုငါ့ site ပေါ်တွင်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး. ငါ installed ကြသောသူအပေါင်းတို့သည်အခြားအလုပ်ကို. မည်သည့်အကြံပြုချက်များ?
ဇန္နဝါရီလ 27, 2010 တွင် 6:33 ညနေ
သင်က MSN ကိုဘာသာပြန်ဆိုသူတစ် key ကိုရှိရမည် (settings စာမျက်နှာအတွက် link ကိုတွေ့မြင်) ဒီများအတွက်အလိုအလျောက်ဘာသာပြန်ချက်သာဒီ key ကိုအတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ် (သော့ကိုအပြီးပေါ်လာတဲ့အရာဖြစ်တယ် appId=, သင့်အမှု၌ဖြစ်ပါသည် 1zIKzHh6jAQfUK_X5HQC7d2WCkcfGVAV)
ဇန္နဝါရီလ 28, 2010 တွင် 5:16 ညနေ
ဇန္နဝါရီလ 30, 2010 တွင် 2:04 နံနက်
ဟုတ်ကဲ့, သငျသညျလုံးဝမှန်ကန်သောများမှာ, အဆိုပါ async တင်ချောင်အချို့လှည် compatibility ကိစ္စများဖဲ့နဲ့တူပုံရသည်.
ငါပြင်ဆင်ချက်ပြင်ဆင်ကြပြီ, နှင့်၎င်း၏အဆိုပါ svn အတွက်, ကျွန်မအလုပ်လုပ် patch ကိုဖြစ်သင့်သောအရာကိုသင်ပို့ခဲ့ကြပြီးကိုယ်ကဒဏ်ငွေပါလိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ်.
ကို Safe ကပြောပါတယ်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 6, 2010 တွင် 6:03 ညနေ
ဒီအသုံးဝင်သော plugin ကိုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. ငါအသုံးပြုရန်နှင့်ကျနော်တို့ rewritable URLs များကိုအတူကအသုံးပြုတဲ့အခါငါကို RSS feed ကိုအပေါ်ဖြည့်ဆည်းမယ့်ပြဿနာလည်းမရှိစဉ်းစား.
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 6, 2010 တွင် 8:26 ညနေ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 18, 2010 တွင် 5:56 ညနေ
နောက်ဆုံးသတင်းများရရှိရန် RSS အကြောင်းကိုဖြေရှင်းပြဿနာ, ငါမူကားနေဆဲမှတ်ဉာဏ်၏ becausi ကုန်ကြောင့်မသုံးလို့ရပါတယ်. ဒီတစ်ခါလည်းသူက server ကိုမှတျဉာဏျန့်အသတ်နှင့်ဆက်စပ်သောရဲ့.
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 15, 2010 တွင် 6:35 နံနက်
ဒါဟာ Pretty Links များ plugin ကိုနှင့်အတူကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မဖြင့် Transposh disable ရန်ရှိသည်.
ဒါဟာတစည်းစေသည် 404 အဆိုပါ Pretty Links များမှတိုင်းပြည်ကုဒ်ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်လင့်များ. ထွ: mydomain.com/en/my-short-link ဖြစ်လာ mydomain.com/my-short-link.
အခုတော့ကိုယ့်ပြီ 1200+ ကြှနျုပျ၏ Google Webmaster Tools များထဲမှာမတှေ့စာမကျြနှာ.
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 15, 2010 တွင် 8:30 နံနက်
ကြောင်း plugin ကိုမှတိုက်ရိုက်လင့်ခ်ပို့ပေးပါ ကျေးဇူးပြု., လည်း – အဆိုပါဘာသာပြန်ထားသောစာမကျြနှာထိုကဲ့သို့သော lang = en အဖြစ်ရာမီတာများကိုသုံးပါလိမ့်မယ်ဒါမှအတောအတွင်း၌သငျ Permalink ကို disable ကြိုးစားနိုင်
ဒီဇင်ဘာလ 29, 2011 တွင် 11:53 နံနက်
ကိုယ့်အထက်ကပြဿနာတွေ့ရှိတစ်ဦးကအပူချိန်ပြင်ဆင်ချက်ငါ၏အဒိုမိန်းအမည်များမတိုင်မီ www ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်အမှု www ရှိပြီးသားတစ်ခုကိုဖယ်ရှားပစ်တည်ရှိ.
ဤနည်း Transposh Pretty Links များအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးတိုလင့်များကိုချိုးဖျက် doesnt
Transposh-wordpress အတွက် Changeset [f5552f2]: Add support for FQDN rel alternate. Remove update check block on ... ဇွန်လ 17, 2018
Transposh-wordpress အတွက် Changeset [1437f05]: Fix parser to support fqdn alternate hreflang ဇွန်လ 17, 2018
Transposh-wordpress အတွက် Changeset [5e28fc3]: v1.0.0 release is imminent ဇွန်လ 15, 2018
Transposh-wordpress အတွက် Changeset [bece739]: Update for .js license files, and now those are not included in ... ဇွန်လ 15, 2018
Transposh-wordpress အတွက် Changeset [bc68f19]: UI Theme isapart of the wporg version too ဇွန်လ 14, 2018